Nezvedu | Cangzhou Kuntai Metal zvigadzirwa Kugadzira Co, Ltd.
Nheyo & Nzvimbo
Kubva payakatangwa muna 2010, Cangzhou Kuntai Metal Zvigadzirwa Zvekugadzira Co, Ltd ine mbiri yakamira yekuremekedza uye kugadzira zvinhu mukugadzirwa kweSV mavharuvhu uye zvigadzirwa. Inowanikwa muCangzhou, Hebei Province, iri padhuze neXingang Port, Tianjin, inotipa yakanakira migwagwa mamiriro.
Nezvekutumira kunze kwenyika zvinopfuura makumi matatu nyika, takamisa mukurumbira wakanaka kubva kune vatengi vemuEurope, America, Middle East, South East Asia nedzimwe nzvimbo dzepasi. Kuburikidza nemakore gumi eruzivo, isu tinoziva kugadzirisa matambudziko eprojekiti kune chero indasitiri, sezvo isu takazvitsaurira timu yeinjiniya kugadzirisa chero matambudziko ane chekuita nekushandiswa kwema indasitiri.
KUNTAI inopa huwandu hwakasiyana hwekuyerera zvigadzirwa zvinodzora, zvinosanganisira Ball Valve, Gonhi Valve, Globe Valve, Tarisa Vharu, Y Strainer, Camlock / Kurumidza Coupling, uye ese marudzi ese ezvigadzirwa zvakagadzirwa nesimbi isina chinhu, iine zvinhu zvikuru 304 / 304L / 316 / 316L, nezvimwewo. Kana iwe uchitsvaga yepamusoro-soro mavhavhisi eSS uye maChina, ndapota vimba Kuntai achakupa zvakaringana zvinoshamisa.
Zvigadzirwa zveKUNTAI zvinoshandiswa zvakanyanya muminda zvine chekuita nemafuta & gasi, makemikari & petro-kemikari, indasitiri yekudya, kuwanikwa kwemvura, kurapwa kwemvura, kuvaka & kuvaka, indasitiri yechiedza, magetsi ekugadzira, mishonga, bio-tekinoroji, marabhoritari zvekushandisa. vamwe.
KUNTAI inovhara nzvimbo yemamirimita zviuru gumi nezvitanhatu, ine vashandi vanopfuura mazana maviri, inoita gore roga roga pamakubhiti mazana masere.
Isu tine tambo yekugadzira yakakwana, kubva kuumbirwo hwekuumbwa, kukanda, machining kusvika pamusoro kurapwa. Panyaya ye tekinoroji, tine yakasimba R&D kukwanisa kusangana nezvinodiwa zvevatengi, zvakadai seyakadzika gomba, yakaoma patseti, yakanyatsomira nzvimbo, nezvimwe.
Takatora IS0 9001 yemhando yekumanejimendi system satifiketi, Setifiketi yeRoHS kutevedza uye iyo CE chitupa, icho chinopa chivimbo chekuti zvigadzirwa zvakachengeteka uye zvinokwanisa.
KUNTAI ibhizinesi rakazvimirira roga iro rakakwaniswa kuitwa nekushingaira uye kuzvipira kwevashandi varo. Nevimbiso yekuve yepamusoro yepamusoro nekutarisisa kuongororwa mune zvese maitiro, tinopa chiyero chekunakisa kwezvinhu zvakagadzirwa kune ese edu uye epamberi vatengi. Kwese kwaunenge uri munyika, kunyangwe zvakaoma sei zvaunoda, isu tinovimbisa mhinduro nekukurumidza kune zvese zvaunoda. Isu tiripano imi!
Ndokumbirawo mubate info@kuntaivalve.com kune rumwe ruzivo!